सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नाममा परमादेश जारी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारका नाममा परमादेश जारी
शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ ०९:३६ मा प्रकाशित !
१८चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ३७ ले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित आवासको हकको प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त मापदण्ड बनाई जारी गर्न आदेश गरेको हो ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि भवनसंहिता बनाई अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था माग गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रविन्द्र जोशीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले सुरक्षित भवनका लागि भवनसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अधिवक्ता वासुदेव रिजालको सोही मागदाबीको रिटलाई पनि लगाउ कायम गरी अन्तिम सुनुवाइ गरेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न मुलुकैभर उपयुक्त मापदण्ड जारी गर्न आदेश जारी गरेको हो। यस्तै उपत्यकामा अव्यवस्थित संरचना नबनाउन र बन्न नदिन पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अदालतले भूकम्पप्र्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको छ ।
रिटमा अव्यवस्थित भवन निर्माण रोक्न भवनसंहिता बनाई लागू गर्न माग गरिएको थियो । यस्तै भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको लागू र कार्यान्वयन अनुगमनको प्रबन्धको पनि माग गरिएको थियो । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा प्रशस्त ठाउँ छाडेर बस्ती बसाउन, माटो जमिनको परीक्षण गरी अवास निर्माण गर्ने व्यवस्थाको माग पनि रिटमा गरिएको थियो । अधिकार प्राप्त निकायबाट एक किसिमको नक्सा पास गरी फरक ढङ्गले संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न र फरक रूपमा बनेका संरचना भत्काउन पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।
भवन निर्माणको अनुमति दिँदा आधारभूत सवारीसाधनहरू एम्बुलेन्स दमकल लगायतका साधन सहज रूपमा ओहोरदोहार गर्न मिल्ने गरी संरचना निर्माणको अनुमतिको व्यवस्था गर्न पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।
विनाशकारी भूकम्पमा भवन निर्माणका आधारभूत नियमसमेत पालना नभएका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएको भन्दै नियमन र मापदण्डको प्रबन्ध गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । संरचनागत र कानुन सुधारको माग गर्दै अधिवक्ताद्वयले २०७२ जेठ २६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । विनाशकारी भूकम्पमा आठ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: एन्टी रेबिज खोपको अभाव भएपछि सेवाग्राही समस्यामा
NEXT POST Next post: सुरक्षा कारबाहीमा ३३ जना लडाकु मारिए
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ ०९:३६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ ०९:३६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ ०९:३६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ ०९:३६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ ०९:३६